Ity ny lisitry ny 70tànanavoafidy、mora ampiasaina、ary ny mpamatsy aterineto maimaim-poana izay hamonjy anao fotoana sy hery an-taonany.
0.1 Safidy haingana-Karazana Generatera：
3.5 テクスチャ4 Photoshop
Safidy haingana-Karazana Generatera：
Nataoko ireto sokajy ireto ho sokajy 10：
Ny ampahany tsara indrindra amin’ireo fitaovana ireo dia ny fahafahan’izy ireo maimaim-poana（ilaina ny manoratra anarana）.
Raha Mitady fomba haingana kokoa ny asanao ianao ary mandefa fotoana sy hery bebe kokoa hevitra momba ny votoaty vaovao ary -barotra paikady、Mino aho fa ny lisitra dia tsy maintsy-tsoratadidy。アラカNYフィジェリコファラニーWordPress.comの統計、ミホアトラNY XmUMXタピトリサNYブルージーナヴォアカイサムボラナ.
MBAハモロナナパレットmiloko miorina eo amin’ny sary.
Omeo ireo mpampiasa mba hampitahana、hamerenana、ary hifantina ny lokon-tsarimihetsika milamina.
Adobe Color dia fampiharana miorina amin’ny rahona hamolavolana lohahevitra amin’ny alalan’ny iPhone na ny navigateur。 Ny fitaovana dia manampy ny fanangonana loko avy amin’ny sary sokitra、zaridaina、na aiza na aiza misy anao ary mamorona ny volonao manokana。 Azonao atao koa ny manaisotra ny loko amin’ny sary ary mampifanaraka ireo lohahevitra ireo ao amin’ny Adob​​e Illustrator CC.
Ny fitaovana loko hafa tsy dia tsara loatra dia Color Hunter、Color Lovers、CSS Drive Colette Palette Generator、ary koa Colllor。 Mariho fa na dia miasa bebe kokoa aza ireo fitaovana ireo（mamoronaパレットmiloko miorina amin’ny sary fampidiran-tsary）fa ny自動生成nyコードcouleur dia mety hafa noho ny fahasamihafana amin’nyアルゴリズムfampirimana loko。 Manoro hevitra anao aho mba hanandrana ny tsirairay、fara fahakeliny.
Raha te hianatra bebe kokoa、tsidiho：Clickability、SEO Book、IM Ninja、Submit Shop、ary Pipe Yellow.
MBA hamoronana hainganaスクリーンショットamin’ny tranonkala ho an’ny fanaraha-maso na tanjona votoaty.
MBA hamoronanaサムネイルny tranonkala iray mafana.
Izaho manokana dia mahita Shrink The Web no fitaovana fakana sary an-tserasera farany。 Izy io dia haingana、avo lenta、mora ampiasaina amin’ny mpampiasa、ary tena zava-dehibe fa mamorona sary tsy misy dikanteny amin’ny rano.
応答性の高いve aho dia tsy mpamokatra fakana sary？ Na izany aza、fitaovana iray tsy tokony ho lanonana izany-Manara-maso ny fandraisana andraikitra amin’ny tranokala rehetra miaraka amin’ny kitay tokana。 Fotoam-panam-potoana lehibe ho an’ireo izay mamolavola lohahevitra mamaly izany.
代替：Favicomatic、Gen Favicon、Favicon Generator、InMotion Favicon Generator、ary koa Faviconr.
Ny sasany amin’ireo fitaovana ireo dia mitaky anao haka sary ny sary afara; Ny sasany dia hanome anao ny CSS rehetra.
タータンメーカー-Sary ao amin’nyタータンスタイル
Colorzilla-Mamolavola dingana miandalana ao amin’ny CSSコード.
テクスチャ4 Photoshop dia mamorona lahatsoratra amin’ny endritsoratra manokana.
GRサイト-mamorona bokotra amin’ny endri-tsoratra sy ny loko.
代替案：IMG、DIY LOL、Manaova Meme ary IMG Flipが大好き.
フォームLogix-Famoronana rindrambaiko tsotra tsotra-n-paste-WYSIWYG rediredy misy.
PHPフォーム-Mamorona endrika HTML ao amin’ny 3つの簡単なステップ、tsy mila sonia.
Formoid-Mamolavola endrika tsara tarehy、mamely miaraka amin’ny GUIドラッグアンドドロップ.
15 бесплатних слика за узорке на мрежи